1 afọ 11 ọnwa gara aga #365 by Mathew3120
M chọrọ ịjụ a ajụjụ banyere installers, mgbe gị ụmụ okorobịa imelite gị installers maka addons.Will ochie installers ka na-enwe ike ibudata na addons ma ọ bụ ka m ga-ibudata na Adon na Imea ọzọ na ọhụrụ installer.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #366 by rikoooo
Ị ga-download ndị Adon na Imea ọzọ, ọhụrụ installers dị njikere maka ọhụrụ P3D na FSX Steam, na-amalite site installer version 10.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #374 by rufgar
Hi. M na nso nso ebudatara pilatus pc-9 gị ụlọ ahịa na ndabara ebe nchekwa bụ nanị fsx na-adịghị fsx-uzuoku. M depụtaghachiri na pasted ka fsx-uzuoku na ya arụ ọrụ nke ọma ma e wezụga n'ihi na gauges. Ọ bụ n'ebe a kwachie maka nke a ma ọ bụ otú m nwere ibudata ọzọ? Ekele.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #376 by Gh0stRider203
rufgar dere, sị: Hi. M na nso nso ebudatara pilatus pc-9 gị ụlọ ahịa na ndabara ebe nchekwa bụ nanị fsx na-adịghị fsx-uzuoku. M depụtaghachiri na pasted ka fsx-uzuoku na ya arụ ọrụ nke ọma ma e wezụga n'ihi na gauges. Ọ bụ n'ebe a kwachie maka nke a ma ọ bụ otú m nwere ibudata ọzọ? Ekele.
otú ahụ ka gauges adịghị ịwụnye, bụ ihe ị na-ekwu? Dị nnọọ wanna jide n'aka na anyị na otu peeji nke n'ihu m na-amalite aro stof
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: rufgar
1 afọ 11 ọnwa gara aga #377 by rufgar
Ee cockpits bụ n'ebe e ma gauges anaghị arụ ọrụ.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #378 by Gh0stRider203
ọma, mgbe m na-agba ọsọ Gold Edition, ihe m na-aghọta mgbe ọ wụnye na a dị iche iche directory karịa Steam, MY Understanding bụ na mgbe ị na-esi na FSX ndekọ na uzuoku, na ihe niile bụ otu ihe ahụ (biko gbazie m ma ọ bụrụ na m ' m na-ezighị ezi).
I kwesịrị nnọọ inwe ike wụnye ya ka nkịtị, mgbe ahụ, dị nnọọ akpali ihe niile kwesịrị ekwesị nchekwa. M na-guessing nke a bụ ihe i mere?
Ị ga-agbaghara m akpa ọchị m na mgbe eji FSX Steam Edition akpa ọchị Chineke maara mgbe ọ bụla m nwere iji nweta ya, ọ na-agbarapụ a eze mgbu na ahem ị maara ihe niile ... ahhh stof m nwere lmao m mean..My FSX nchekwa bụ naanị erm 67.2 gigs .... akpa ọchị
1 afọ 11 ọnwa gara aga #379 by rufgar
Ọ na-apụghị wụnye ozugbo na fsx-uzuoku. A ga-depụta Baịbụl fsx. Nke a pụtara a iche iche gauges config ka e keworo ha na-arụ ọrụ. Ọ dịghị onye n'ime m gauges si fsx ga-arụ ọrụ na uzuoku.
1 afọ 11 ọnwa gara aga #380 by rufgar
1 afọ 11 ọnwa gara aga #381 by Gh0stRider203
A (dịkarịa ala na tiori) abụ a gauges nchekwa na uzuoku version ....
Lemme esi jide ụfọdụ buddies, ma eleghị anya, ha nwere ike inyere mma karịa Me
1 afọ 11 ọnwa gara aga #382 by rufgar
Ekele ma ọ bụ nwunye ukwuu esịtekọm